people Nepal » दुब्लाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपायहरु दुब्लाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपायहरु – people Nepal
दुब्लाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपायहरु
एजेन्सी, २३ जेठ । मोटोपनले सताएको छ ? दुब्लाउन चाहनुहुन्छ । दैनिक भागदौड जीवनमा मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहदाँ चाहदै पनि उनीहरुलाई उपायहरुको कमीका कारण दुब्लाउन सकिरहेका हुँदैनन् । आउनुहोस् हेरौ मोटोपनबाट छुटकारा पाउन के के गर्नुपर्छ थाहा पाइराख्नुहोस् ।
दैनिक ३–४ पल्टभन्दा बढी खाना खानु हुँदैन । सधैँ नियमित रूपले निश्चित मात्रामा खाद्यपदार्थको प्रयोग गर्नुपर्छ । एकै पल्ट धेरै खाना खानु उचित हुँदैन । भोकको अनुभूति भैरहेमा अति कम क्यालोरी दिने खाद्यपदार्थहरू जस्तै– गाजर, काँक्रो, कागतीको सर्बत आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बेलुकाको खाना अलि सबेरै, बेलुका ७ बजेभित्र खानु उपयुक्तहुन्छ । खाना खानेबित्तिकै सुत्नु हानिकारक हुन्छ ।
कोरोना खोप लगाएको ३ महिनामै अब बुस्टर डोज दिइने